Banyere ịbanye n'ike nke TPAN - World March
Home » Noticias » Nkwukọrịta Ozi » Banyere ikike nke TPAN
Nkwupụta banyere ịbanye n'ike nke Nkwekọrịta na Mmachibido Ngwá Agha Nuclear (TPAN)
Nkwupụta banyere ịbanye n'ike nke Nkwekọrịta na Nkwechi Ngwá Agha Nuclear (TPAN) na ncheta afọ 75 nke Mkpebi 1[I] nke UN Security Council
Anyị na-eche ihu "mmalite nke mkpochapụ ngwá agha nuklia."
Na Jenụwarị 22, Nkwekọrịta na Amachibidoro Ngwá Agha Nuclear (TPAN). Ọ ga-amachibido ndị otu States iwu ịmalite, ịnwale, imepụta, n'ichepụta, inweta, ịnwe, ibubata, iji ma ọ bụ iyi egwu iji ngwa agha nuklia ma nyere aka ma ọ bụ gbaa ụdị omume ahụ ume. Ọ ga-anwa ime ka iwu mba ụwa dị ugbu a sikwuo ike na-eme ka mba niile ghara ịnwale, iji ma ọ bụ yie egwu iji ngwa agha nuklia.
para Withoutwa na-enweghị Agha na Ime Ihe Ike Ọ bụ ihe kpatara ememme n'ihi na site ugbu a gaa n'ihu, a ga-enwe usoro iwu na mpaghara ụwa nke na-akọwapụta ebumnuche nke ọtụtụ ụmụ amaala nke ụwa kpuchiri ruo ọtụtụ iri afọ.
Okwu mmalite nke TPAN gosipụtara ihe egwu dị adị site na ịdị adị nke ngwa agha nuklia na ọdachi ndị mmadụ ga-esi na ya pụta. Ndị na-akwado nkwekọrịta ahụ na ndị kwenyere na-egosipụta ihe egwu a ma gosipụta ntinye aka ha na ụwa nke enweghị ngwa agha nuklia.
Site na mmalite a dị mma ma jiri ịnụ ọkụ n'obi malite ugbu a, anyị ga-agbakwunye na nkwenye ndị a na-emepe ma kwado iwu iji mejupụta mmụọ nke nkwekọrịta ahụ: gụnyere mmachibido na-agafe na ego nke ngwa agha nuklia. Naanị site na machibidoro ego ya, ịkwụsị itinye ego na ụlọ ọrụ ya, ga-enwe nnukwu akara ngosi na nke bara uru, nke dị mkpa na agbụrụ ngwa agha nuklia.
Ugbu a, a dobere ụzọ ahụ ma anyị nwere olile anya na ọnụ ọgụgụ mba ndị na-akwado TPAN ga-abawanye na aghụghọ aghụghọ a na-apụghị igbochi. Ngwá agha nuklia abụghịzi akara nke ọganihu na nkà na ụzụ, ugbu a, ha bụ akara nke mmegbu na ihe egwu maka ụmụ mmadụ, nke mbụ, maka ụmụ amaala nke mba ndị ahụ nwere ngwa agha nuklia. N'ihi na ngwa agha nuklia "onye iro" bu n'uche kachasie ike n'obodo ukwu nke mba ndị nwere ya, ọ bụghị n'ebe ndị na-enweghị ya nọ.
Enweela TPAN n'ihi afọ XNUMX nke mbuso agha nuklia nke ọha na eze ebe ọ bụ na ogbunigwe nuklia nke Hiroshima na Nagasaki gosipụtara oke mbibi ọdachi ndị mmadụ. Ọ bụ ndị mkpokọta, otu na nyiwe, site na nkwado nke ndị isi obodo, ndị omeiwu na gọọmentị nwere mmata maka okwu a nke na-aga n'ihu ịlụ ọgụ n'afọ ndị a ruo ugbu a.
N'ime afọ ndị a niile, emeela ihe ndị dị mkpa dị ka: nkwekọrịta iji gbochie ule nuklia, mbelata ọnụ ọgụgụ nke ngwa agha nuklia, mmụba nke ngwa agha nuklia na mmachibido ha karịa mba 110 site na mpaghara enweghị ngwa agha. nuklia (Nkwekọrịta nke: Tlatelolco, Rarotonga, Bangkok, Pelindaba, Central Asia Nuclear Weapon-Free, Mongolia's Nuclear-Weapon-Free, Antarctic, OuterSpace and Sea Bed).
N'otu oge ahụ, ọ kwụsịbeghị agbụrụ nke nuklia site n'ike dị ukwuu.
Ozizi nke ịda mba dara ada n'ihi na ọ bụ ezie na ọ gbochiela iji ya eme ihe na ọgụ, ngwa ngwa atomic apocalypse (DoomsdayClock nke ndị sayensị na ndị onyinye Nobel na-achikota) na-egosi na anyị nọ 100 sekọnd site na ọgba aghara atom. Ohere na abawanye kwa afọ na eji ngwa agha nuklia na mberede, ọgba aghara esemokwu, ịgha ụgha ma ọ bụ ebumnuche ọjọọ. Nhọrọ a ga - ekwe omume ọ bụrụhaala na ngwa agha dị ma bụrụ akụkụ nke atumatu nchekwa.
Ngwurugwu nuklia ga-emecha kwenye ọrụ ha iji nweta mkpochapụ nuklia. Na nke a ha kwenyere na mkpebi mbụ nke United Nations, Mkpebi nke General Assembly nke United Nations, nakweere na Jenụwarị 24, 1946 site na nkwenye. Nakwa na Nkeji edemede VI nke Nkwekọrịta Na-agbasaghị Ha gbasiri mbọ ike na-arụ ọrụ maka mkpochapụ nuklia dị ka States States. Ọzọkwa, iwu na nkwekọrịta mba ụwa dabere na iwu na iwu machibidoro iyi egwu ma ọ bụ iji ngwa agha nuklia, dị ka Courtlọikpe Ikpe Mba Nile na 1996 na Kọmitii Na-ahụ Maka Ihe Ndị Ruuru Mmadụ na UN kwuru na 2018.
Mbanye nke ike TPAN na ncheta afọ 75 nke Mkpebi Security Council, ụbọchị abụọ ka e mesịrị, na-enye oge kwesịrị ichetara steeti niile na iwu akwadoghị iwu iyi egwu ma ọ bụ ojiji nke ngwa agha nuklia yana nke ibu ọrụ agha. nuklia, ma dọrọ uche yiri ya ma mejuputa ha ozugbo.
Na Jenụwarị 23, Daybọchị na-esote ịbanye na TPAN, nzukọ MSGySV ibe nke mgbasa ozi mba ụwa ICAN ga-eme Omenala Cyberfestival para ememe "A oké nzọụkwụ maka ndi mmadu”. Ọ ga-abụ njem nke ihe karịrị awa 4 site na ụfọdụ egwu, nkwupụta, ọrụ ndị gara aga na nke ugbu a, ya na ndị na-ese ihe na ndị na-eme ihe megide ngwá agha nuklia na maka udo n'ụwa.
Oge eruola ịkwụsị oge nke ngwa agha nuklia!
Ọdịnihu nke ụmụ mmadụ ga-ekwe omume na-enweghị ngwá agha nuklia!
[I]A ga-ehiwe Kọmitii General Staff iji nye ndụmọdụ na inyere Council Security aka n'ihe niile metụtara mkpa ndị agha nke Council maka mmezi nke udo na nchekwa mba ụwa, ọrụ na iwu nke ndị agha etinyela na ya, na usoro iwu nke ngwa agha na nkwagha.
Otu Njikọ Mba ofwa Na-enweghị Agha na Ime Ihe Ike